यी युवतीले किन गरिन कुकुरसँग विवाह? यस्तो रहेछ कारण | Rajmarga
यी युवतीले किन गरिन कुकुरसँग विवाह? यस्तो रहेछ कारण
दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, तर समाजका कतिपय तप्का अझै पनि हास्यास्पद अन्धविश्वासभित्र गुज्रिरहेका छन् । भारतको जमशेदपुरस्थित आदिवासीहरुको बाहुल्य रहेको आदित्यपूर गाउँमा रहेको कुप्रथालाई यसैको उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।
यहाँको मान्यता के छ भने यदि कुनै पनि बच्चाको पहिले माथिको दाँत झर्यो भने त्यो ठूलो अलक्षिन हुन्छ । यो अलक्षिनलाई भगाउनका लागि सो बच्चाको कुकुरसँग बिहे गराइदिने प्रचलन रहेको छ । यही प्रचलन अनुसार आदित्यपुरको कुलुप टाँडामा हिजो बुधबार ९ जना बालबालिकाको कुकुरसँग बिहे गराइयो । बालकहरुलाई कुकुर्नीसँग र बालिकाहरुलाई कुकुरसँग जोडी बाँधिएको हो ।
Previous post: पति-पत्नीले हरेक विहान गर्नुहोस् यी काम, घरमा हुनेछ सुख,शान्ति
Next post: सबै क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन